Toetr’andro: efa anaty ririnina i Madagasikara - ewa.mg
Toetr’andro: efa anaty ririnina i Madagasikara
News - Toetr’andro: efa anaty ririnina i Madagasikara
Efa tafiditra anaty vanim-potoana
ririnina isika eto Madagasikara, raha ny nambaran’ny mpamantatra ny
toetr’andro etsy Ampandrianomby. Manaporofo izany indrindra ny
firotsahan’ny fanala mamirifiry rehefa madiva haraina. Eo koa ny
zavona miraraka matevina izay manelingelina ny fahitana ho an’ny
mpitondra fiara amin’ny maraina.
Na izany aza, novinavinaina
hafana kokoa ny maripana mandritra ity volana ity, raha ampitahaina
amin’ny maripana tokony ho izy isaky ny volana jona.
Hifanahantsahana na ambany kokoa noho ny tokony ho izy ny
rotsakorana. Mety ho maimaina mihitsy aza saika manerana ny Nosy.
Hisy ihany anefa ny orana any amin’ny faritra Melaky, Atsimo
Atsinanana, Fitovavy. Ny tapany avaratry ny faritra Atsimo
Andrafena no hifanaraka na ho mando kokoa raha oharina amin’ny
mahazatra isaky ny volana jona.
Hisy fiakarany kely ny maripana
ambony ho an’ny afovoan-tany sy ny ilany atsinanana, manomboka ny
zoma fa hidina kosa izany ho an’ny tapany atsimo andrefana.
L’article Toetr’andro: efa anaty ririnina i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Kolikoly sy fanodinkodinam-bolam-panjakana: namoahan’ny fitsarana (Pac) didy fampisamborana i « Peta »
Nivoaka ny didy fampisamborana avy amin’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) ho an’ilay orinasa “Peta” sy ny tompony, Razafindrabakoarisoa Marie Jocelyne Léonard na i Peta. Efa niakatra fitsarana, ny herinandro teo ity raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana sy kolikoly ity. Vokany, voasazy asa an-terivozona dimy taona i “Peta” na Razafindrabakoarisoa Marie Jocelyne Léonard na tsy nipoitra nandritra ny fotoam-pitsarana aza, ka izao namoahana didy fampisamborana izao avy hatrany. Voatana any am-ponja kosa ireo tompon’andraikitra teo anivon’ny minisiteran’ny Atitany, ahina ho mpiray tsikombakomba amin’io tompon’ny orinasa io.Tsy araka ny asa vita ny vola… Raha tsiahivina, kolikoly avo lenta sy fanodinkodinana volam-panjakana tamin’ny tolo-baro-panjakana ho an’ny kaominina Sahasinaka sy Ampasimanjeva ao amin’ny distrikan’i Manakara, Faritra Vatovavy Fitovinany izao nahavoasaringotra azy ireo izao. Nahazo fanampiana manokana avy amin’ny fanjakana, 173 746 571.30 Ar sy 173 096 008 Ar ireo kaominina roa ireo ka natao hanavaozana tranompokonolona izany vola izany. Azon’io orinasa io noho ny resaka kolikoly ny tsenan’asam-panjakana, fanavaozana ny tranompokonolona amin’ny kaominina Sahasinaka sy Ampasimanjeva. Nidina ifotony nanao ny fitsirihana sy fanamarinana ny sampandraharaham-paritry ny fanajariana ny tany, faritra Vatovavy Fitovinany ary nanao tombana ny asa voalaza fa nandaniana ny vola 173.746.571. 30 Ar ho an’i Sahasinaka ary 173 096 008 Ar ho an’Ampasimanjeva. Nivoaka tamin’ny tatitra fa 76.300.920 Ar ny tomban’ny asa fanarenana ny tranompokonolona nambara fa vita tao Sahasinaka, ary 66.208.734 Ar kosa ny tomban’ny asa natao tao Ampasimanjeva. Mitentina 204.332.925,30 Ar izany ny fatiantoka na volam-panjakana very tamin’ireo tsenan’asam-panjakana roa nomena ny orinasa “Peta” ireo. Voalaza anefa fa maherin’ny roapolo ny tranga mitovy amin’ireo ny fomba nanaovana azy.Trondro vaventy eny anivon’ny minisitera… Anisan’ny nahina ho tafiditra ao anatin’izao nefa ny tale iray eo anivon’ny minisiteran’ny Atitany, saingy nanda izany hatramin’ny farany ny tenany noho izy tsy manana fahefana hanome fanampiana manokana « subvention exceptionnelle”, araka ny fiarovan-tenany. Anisan’ny voarohirohy tamin’ireo raharaha ireo koa ny sekretera mpitambola (STC) ho an’ny kaominina Sahasinaka, sy Ampasimanjeva noho izy ireo, voalaza fa noteren’ny tale ara-pitantanana sy ara-bola teo anivon’ny minisiteran’ny Atitany hanao sonia ny taratasim-bola ho an-dRazafindrabakoarisoa Marie Jocelyne Léonard na i “Peta” nefa ny asa tsy mbola nanomboka akory.Midika izany fa anisan’ny “Trondro vaventy” na tsy heno laza firy aza ity raharaha ity raha mitaha amin’ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”. Tsy tokony ho afa-bela avokoa ireo mpiray tendro sy tao ambadik’izao kolikoly izao, indrindra fa ireo tompon’andraiki-panjakana ambony, eny anivon’ny minisitera “Trondro vaventy” tamin’izany.Synèse R. L’article Kolikoly sy fanodinkodinam-bolam-panjakana: namoahan’ny fitsarana (Pac) didy fampisamborana i « Peta » a été récupéré chez Newsmada.
Madajazzcar 2020 – « Conférence-concert »: tsy mbola mivarotra anaty aterneto ny mpanakanto
Mihazakazaka ny teknolojia… Tsy maintsy arahina ve izy ireny ? Nandritra ny « Conférence-concert », hetsika tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny Madajazzcar 2020, omaly, teny amin’ny Alliance Française Antananarivo (Aft Andavamamba) no nampifandraisan’ireo mpanao velakevitra ny tontolon’ny zavakanto sy ny mpanakanto ary ny teknolojia hoenti-mamadika izany ho varotra. Raha ny fanazavan’ireo nandaha-teny, mbola ny facebook ihany aloha hatreto no ampiasain’ny ankamaroan’ny mpanakanto malagasy. Sehatra tsy azo ivarotana loatra anefa izy io. Noho ny antony maro samihafa, vitsy dia vitsy ny mpanakanto malagasy no manana « site web », raha ny fanazavan’ireo mpandaha-teny hatrany. Io teknolojia iray io anefa no anisan’ny varavarana misokatra ho an’ny mpanakanto ka ahafahany mitsofoka ao anatin’ny tontolon’ny varotra. Any ivelany, saika efa ahitana izany avokoa ny sehatry ny kolontsaina rehetra, tahaka ny hira, ny dihy, ny hosodoko, ny fampirantiana isanèkarazany, sns. Efa rivotra iainan’ny mpanakanto vahiny ny fifampiraharahana anaty « site web » raha ilaina ny fanaovana izany amin’ny mpanjifa na amin’ny mpikarakara hetsika isan-karazany. Ny an’ny mpanakanto malagasy anefa, mbola mijanona hatreo amin’ny fampahafantarana ny vokatra vaovao sy ny fandaharam-potoana ho avy ihany ny fampiasana ny « facebook » hatreto. Nandray anjara tamin’ity « conférence-concert » ity Bruce Rakotovelo sy Anjara Rakotozafiarison, nandrindra i Domoina RatsaraFandaharam-potoana anio amin’ny 5 ora hariva eny amin’ny AFT Andavamamba ny seho lehibe miaraka amin’ny groupe Issik feat. Authalia Raveloarison, izay ahitana an’i Sanda Ranaivosoa (guitare), Samy Andriamanoro (clavier), Sitraka Ranaivosoa (batterie), Tahiry Ranaivosoa (basse), Authalia Raveloarison (hira) sy ny AF Jazz eo amin’ny fizarana voalohany.HaRy RazafindrakotoL’article Madajazzcar 2020 – « Conférence-concert »: tsy mbola mivarotra anaty aterneto ny mpanakanto a été récupéré chez Newsmada.
Tsipy kanetibe – FSBM: mpitantana vonjimaika Randriamarohaja Dolys
Tohin’ny sazy avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena ny taranja tsipy kanetibe ampihatoana ny filohan’ny federasiona malagasy teo aloha, voatendrin’ny FIPJP (Fédération internationale de pétanque et jeu provincial) hitantana vonjimaika ny fampandehanan-draharaha ny tsipy kanetibe malagasy Randriamarohaja Dolys. Nanambara izany tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ity mpitantana voatendry ity sy ireo mpikambana rehetra eo anivon’ny fikambanana vaovao vao natsangana, nomena ny anarana hoe FSBM (Fédération des sports boules de Madagascar). Marihina fa efa nisy ny fifanatonana teo aminy sy ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, taorian’ny fankatoavana avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena. Noraisina ity fanapahan-kevitra ity, araka ny nambaran-dRandriamarohaja Dolys ny hahafahan’i Madagasikara miatrika ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika, hotanterahina any Lomé, Togo, ny 14 hatramin’ny 16 jona ho avy izao. Araka izany, hisy ny fifaninanana lehibe hifantenana izay mendrika hisolo tena an’i Madagasikara amin’io fiadiana ny tompondaka an’i Afrika io. Ny 23 hatramin’ny 25 mey izao no hanatanterahana izany, eny amin’ny kianja Complexe Gamo Ampasampito. Mazava ho azy, hikarakara ity lalao ity ny FSBM. Ity farany izay hitantana ny federasiona mandra-pahavita ny fifidianana eny anivon’ny seksiona sy ny ligy ary ny fifidianana hitondra ny federasiona malagasy ny taranja tsipy kanetibe.Tsy nanadino ny nisaotra ny FIPJP Randriamarohaja Dolys, tamin’ny fametrahana fitokisana aminy ary nanamafy ity farany fa hifantoka tanteraka amin’ny famerenana amin’ny laoniny ny fomba fitantanana sy ny fifandraisana amin’ny rantsa-mangaika rehetra ho fampandrosoana ity taranja ankafizin’ny Malagasy ity ny tenany. Mi.RazL’article Tsipy kanetibe – FSBM: mpitantana vonjimaika Randriamarohaja Dolys a été récupéré chez Newsmada.
Tranga hafahafa :: Fatin-jaza tsy nisy tapany ambony hita teny an’arabe
Ny tapany ambany amin’ny vatan’ny zazakely iray sisa no hita teny amin’ny arabe, tany Anambo Andrefana-Ampanefena-Vohémar, tamin’ny talata maraina lasa teo. Lahikely io zaza io ary tombanana ho efatra taona. Tsy fantatra ny momba­momba azy. Nandray andraikitra nandevina ny razana ny Ben’ny tanànan’ Ampanefana sy ireo foko­nolona any an-toerana. “Notapahina mihitsy ilay zazakely raha ny fahitana ny vatany. Tsy fantatra izay nahavanon-doza fa mbola karohina. Na izay mety ho havan’io zaza io ihany koa aza tsy mbola fantatra. Ahiana ho efa novonoina tany amin’ny toerana hafa izy vao natsipy teo amin’ny arabe”, hoy ny fitantaran’ireo mponina any an-toerana. L’article Tranga hafahafa :: Fatin-jaza tsy nisy tapany ambony hita teny an’arabe est apparu en premier sur AoRaha.
Songadina an-tsary: fanamasinana eveka tetsy Mahamasina
L’article Songadina an-tsary: fanamasinana eveka tetsy Mahamasina a été récupéré chez Newsmada.
Mpanao politika, i Jean Zorés: « Manohera amin’ny fanitsiana fa aza manakorontana »
Tsy mitsahatra maneho hevitra ka manafatrafatra ireo mpanao politika i Nambinisoa Jean Zorés. Anisan’ny nomeny lesona ny eo anivon’ny fanoherana. « Ny mamboly atao sakafo no vahaolana fa tsy ny mamboly korontana. Manohera amin’ny fanitsiana fa tsy ho amin’ny fanakorontanana. Fantatra ny fiantombohan’ny korontana fa tsy fantatra ny hiafarany. Hevi-diso ny fiheverana fa fanavotana ny fijaliam-bahoaka efa misy ny fisian’ny korontana”, hoy izy. Nisaorany ny filoha mpitarika ny mpanohitra, Ravalomanana Marc, naniraka ireo mpiara-miasa aminy nizara sakafo sy rano tany atsimo. Fanehoana fitiavana sy fandavan-tena izany, araka ny nambarany.Mizotra amin’ny lalan-diso RavalomananaGaga anefa ny tenany raha naheno ny lahatenin’ny mpanorina ny Tim tamin’ny fiandohan’ny taona ny amin’ny hitarihany ny mpanohitra mba hanamafy ny hetsika fanoherana. “Inona ny hevitr’izany ? Hanakorontana sa hidina an-dalambe ?”, hoy ny fanontaniany. Nohitsiny fa tsy tokony ho tonga amin’izany lalan-diso izany ity filoha teo aloha ity. Notsiahiviny fa manana andraikitra eo anivon’ny fiangonana Ravalomanana Marc. “Tsy mankasitraka ny fikomiana Andriamanitra ary mampanaja sy mampanaiky ny olom-boafidy eo amin’ny firenena”, hoy izy.Ireo manodidina ny filoha Rajoelina AndryNanafatrafatra ny eo anivon’ny fitondrana koa ity mpanao politika ity. Mazava ny nambarany ny amin’ny tsy tokony handaniana fotoana, mbola ananana nefa hisehosehoana fotsiny. “Aoka hatokanareo ho an’ny filan’ny vahoaka maro anisa ny 80% amin’ny hery sy ny fahefana eo an-tananareo. Aoka koa mba ho olona manana traikefa no ho maro anisa amin’ireo manodidina ny filoha Rajoelina Andry, hanampy anao hiatrika izao fahasahiranana eto amin’ny firenena izao”, hoy ihany izy.Synèse R. L’article Mpanao politika, i Jean Zorés: « Manohera amin’ny fanitsiana fa aza manakorontana » a été récupéré chez Newsmada.
697 ieo tanora tsy manana asa ao amin’ny faritra Itasy nisitraka fampiofanana hahafahana miditra amin’ny sehatry ny asa ara-dalàna. Anisan’ny be mpanaraka ny fiofanana mikasika ny teknikam-piompiana kisoa sy voly avotra ary ny fiompiana akoho gasy nohatsaraina.Tanjona ny hampahaleotena ara-pivelomana ireo tanora aorian’ny fiofanana. Niarahana tamin’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy fanofanana arakasa sy ny MFR ao Miarinarivo ary ny Formaprod ao Itasy izany.Nihaona tamin’ny solontena maharitry ny OMS, mandrindra maneran-tany ny tontolon’ny fahasalamana ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ny faraparan’ny herinandro teo. Noresahina ny vina napetraky ny filoha hitondrana ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Nifantoka tamin’ny lohahevitra dimy ny resaka ka teo ny mahakasika ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, ny fampitaovana ireo hopitaly, ny mahakasika ny mpiasan’ny fahasalamana amin’ireny toerana ireny ary ny fametrahana ny tolotra ara-pahasalamana manaja ny maha olona. Noresahina koa ny ady amin’ny kolikoly. Hanamafy ny rafitry ny fahasalamana eto Madagasikara izany.Hotanterahina ny alahady 6 desambra izao ao amin’ny Lycée Nanisana ny fitsapam-pahaizana amin’ny teny japoney (JLPT), fanao isan-taona.Hatao ao amin’ny masoivoho japoney, hatramin’ny 9 oktobra izao, ny fisoratana anarana ho an’ireo hanatanteraka izany. Mila manaja ny fepetra ara-pahasalamana ireo rehetra tonga misoratra anaranaL’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Kitra iombonana: katikely 12 hotsongaina eny anivon’ny Boriborintany IV
Ankizy 120 no hotson­gain’ny eo anivon’ny CUA sy ny klioba Kintana Fc mane­rana ny boriborintany VI eto an-dRenivohitra ary hahazo fampiofanana amin’ny tontolon’ny kitra manomboka ny 19 jona ho avy izao. Maro ireo ankizy mikasa ny handeha lavitra amin’ny tontolon’ny baolina kitra ary tsapan’ny eo anivon’ny Kaominina sy ny mpiara-miasa aminy izany. Hanatona mivantana ireo katitakely eny anivon’ny fokon­tany ny mpanazatra tekinisianina eo anivon’ny Kintana Fc miaraka amin’ny tomponandrikitry ny fanatanjahantena eo anivon’ny CUA ary hitily ireo izay tena sangany amin’ izy ireo, hahafahany mive­latra amin’io sehatra io. Zazalahy 80 isaky ny boriborintany, manodidina ny 13 ka hatra­min’ny 16 taona ireo hanaovana ny fitiliana fahaiza-milalao ireo. Ny 20 mendrika no hanaraka fiofanana mandritra ny roa volana etsy amin’ny kianja an’Alarobia. Aorian’ izay, ankizy 5 misongandina indrindra amin’ireo 20 isaky ny boriborintany no hisitraka fampiofanana mandritra ny herintaona ao amin’ny klioba Kintana Fc. Marihina fa isan’ ny fanatanterahana ny Veli­rano fahadimy nataon’ny ben’ ny Tanàna, hanampiana ny tanora hivelatra anatin’ny tontolon’ny fanatanjahantena izao hetsika izao.Tsiferana R.L’article Kitra iombonana: katikely 12 hotsongaina eny anivon’ny Boriborintany IV a été récupéré chez Newsmada.
L’Organisme Mixte de Conception (OMC), représenté par le Préfet, soutient que le jeune décédé par balle hier n’était pas un étudiant de Maninday. Il appelle donc les universitaires à se calmer. De même, le patron de la Circonscription de la Gendarmerie confirme que le mort n’est pas un originaire de Tuléar. « Pour que les Forces de l’Ordre (FO) puissent mener leur investigation, la franchise universitaire a été levée », dixit le Président de l’Université de Tuléar. De leur côté, les étudiants, retranchés au Campus de Maninday, crient haut et fort que ce malheureux était leur camarade. D’ailleurs, un compagnon de lutte aux côtés de la victime a gardé une douille pour montrer que les forces de l’ordre ont tiré à balles réelles, quand ils ont été attaqués hier, mercredi 16 Juin près de la barrière du Campus. Une enquête est donc nécessaire pour connaître la vérité . Un Professeur de l’Université a reconnu tout de suite qu’il s’agissait bel et bien d’un étudiant de l’Université de Maninday, en provenance d’une autre province, après identification de la dépouille. « Comme il s’agit d’un sortant de 5è année en gestion/économie, il se peut qu’il ne soit pas inscrit cette année », raisonne le même professeur. Cette dernière version est possible car plusieurs meneurs de grève sont des sortants qui attendent la validation de leur Master, une validation qui tarde à venir. Pendant ce temps, le cadavre gisait toujours à la morgue, ce jeudi 17 Juin, ce qui démontre que le jeune sans vie, vient d’une autre Région, loin de sa famille. Les étudiants veulent bien le récupérer, mais ils sont séquestrés au Campus et ne peuvent aller à la morgue de l’Hôpital pour s’occuper de lui, et lui rendre un dernier hommage. Charles RAZA L’article Grève à l’Université de Tuléar : Le jeune décédé n’est pas un étudiant, selon les autorités est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Grève à l’Université de Tuléar : Le jeune décédé n’est pas un étudiant, selon les autorités a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kitra – “Cosafa cup 2021”: iray vondrona amin’i Zambia ny Barea
Hotanterahina ny 7 ka hatramin’ny 18 jolay ho avy izao ny andiany faha-20 amin’ny “Cosafa cup”, sokajy “senior” lehilahy. Fifaninanana natokana ho an’ireo firenena aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika. Hampiantrano izany ry zareo Afrikanina tatsimo ka ao amin’ny kianja Nelson Mandela Bay, ny hanaovana ireo fifaninanana. Iray vondrona amin’i Zambia tompondaka. Ekipa tsy zovina amin’ny Malagasy ry zareo Zambianina, satria efa nikatroka tamin’ny Barea, ny taona 2018. Resin-dry zareo teo amin’ny manasa-dalana, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 ny Malagasy, tamin’io ary nitana ny laharana fahefatra ny Barea. Tsiahivina fa tsy nandray anjara ny Barea de Madagascar, ny taona 2019. Niato moa ity Cosafa cup ity, tamin’ny taon-dasa, noho ny fisian’ilay valanaretina coronavirus, ary izao miverina izao indray. Ankoatra izay, mbola hiaraka amin’ny Malagasy ihany koa ry zareo Kaomorianina, izay hiatrika ny Can 2022.Tompondaka Sokajy “A” Afrika Atsimo Lesotho Soazilandy Botsoana Sokajy “B” Zambia Malawi MadagasikaraKaomoro Sokajy “C” Senegal Zimbaboe Mozambika NamibiaL’article Kitra – “Cosafa cup 2021”: iray vondrona amin’i Zambia ny Barea a été récupéré chez Newsmada.